भ्वाइसेस फर बजेट ५ : वैकल्पिक शिक्षण विधि विकासलाइ प्राथमिकता दिउँ - Followkarnali
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट आगामी असार १ गते ल्याउँदै छ । विगतदेखि नै शैक्षिक क्षेत्रमा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश हाल कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण अझै कमजोर बनेको छ । निषेधाज्ञा लकडाउनको अवधिमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बाहेक कर्णाली प्रदेशका अन्य भूभागहरूमा अनलाइन कक्षा समेत सञ्चालन हुन सकेनन् । यसको मुख्य समस्या थियो विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा नहुनु । यति मात्र होइन इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुनाले अन्य समयमा पनि विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहज हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापना भएदेखि नै प्रदेश सरकारको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै प्राथमिकता नदिएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाउँदै आएका छन् । यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी समेट्न सक्छ ? शिक्षा क्षेत्रमा कस्ता बजेट तथा कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् ? यी प्रश्नहरू हामीले कर्णाली प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञ एवं जानकारहरू सँग राखेका छौँ । कर्णाली प्रदेश सरकार को आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नागरिक स्तरबाट सुझाव दिनका लागि हामीले ‘भ्वाइसेस फर बजेट’ स्तम्भ सुरु गरेका छौँ । यो स्तम्भको पाँचौं श्रृंखला हो । यो शृङ्खला कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र कसरी समेटिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ ।
Prevभ्वाइसेस फर बजेट ४ : ‘आगामी बजेटमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमुलक वनाऔँ’
Nextभ्वाइसेस फर बजेट ६: जवाफदेहि सरकार आवश्यक, सेवा प्रवाहमा प्रविधिकाे प्रयाेगलाइ प्राथमिकता